War Xasaasi ah : Madaxweyne Farmaajo oo aan Hilmaami Dooni Axsaanka uu u Sameeyay Jawaari (Akhriso) | Allbanaadirtimes.com – Somali News Update
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa si weyn ugu qanacsan talaabadii uu gudoomiyaha barlamaanka Prof Jawaari ukala dhantaalay xildhibaanadii Horusocod ee uu hogaamiyo C/Rashiid Xidig.
Xog la helay ayaa sheegeysa in Xildhibaanada Mucaaradka ee dhawaan Muqdisho iyo Nairobi uga dhawaaqay Madasha Horusocod ee looga soo horjeedo dowlada Federmaajo ay haatan wiiqantay awoodoodii.
Wararku waxa ay sheegayaan in Xildhibaanada Mucaaradka ay isku hoolen diyaarinta Mooshin ka dhan ah Ra’isul wasaaraha Xukuumada Xasan Kheyre.
Mooshinka oo muddo hal maalin ah socday diiwaan galintiisa ayaa la sheegay inuu hakiyay Guddoomiyaha Baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, kadib markii uu dalbaday in lasiiyo fursad uu ku xalinkaro tabashada Xildhibaanada ay ka qabaan Kheyre.
Guddoomiye Jawaari ayaa sidoo kale Xildhibaanada Mucaaradka u qabtay in fursad loo siiyo muddo afar maalin oo ay uga bilaabaneyso maanta oo Sabti ah, si loo xaliyo Kacdoonka Siyaasadeed oo ay wadaan Xildhibaanada.
Guddoomiyaha ayaa Xildhibaanada u sheegay in Madaxda Qaranka ay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan Tabashada jirta, balse waxa uu nasiib darro ku sheegay in la qaato go&#8217;aan degdeg ah oo aan mirro dhalkiisa muuqan.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa Xildhibaanada Mucaaradka ku wargaliyay in gogosha lagu xalinaayo Tabashadooda ay taal magaalada Muqdisho, loona baahan yahay inay iska xaadiriyaan Xamar.
Arintaas ayaa si weyn uga farxisay madaxweynaha DFS iyo Ra’isul Wasaare Kheyre, waxaana taas ay cadeyneysaa sida hogaanka barlamaanka iyo tan dowladda ay isugu xiran yihiin.